Gionee Steel 5, taleefanka dhexe ee sumadda ee xiga | Androidsis
Gionee Steel 5, oo ah nooca soo socda ee taleefanka dhexe
Gionee wuxuu rabaa inuu xoog ku soo laabto suuqa bilaabista taleefan cusub oo meel dhexe ah sannadkan kaas oo bilaabmay dhawaanahan. Shirkadda Shiinuhu waxay ku dhawaaqday inay kacday dhammaadkii 2018, laakiin dhawr bilood ka dib waxay Aasiya iyo dhulal kale ka bilawday saldhigyo cusub oo guur -guura iyada oo ay ugu wacan tahay ballaarinta.
Soo -saaraha ayaa ku dhawaaqay bishii Sebtembar F9 Plus, taleefan heerkiisu hooseeyo oo runtii qiimo jaban loogu heli karo jeeb kasta, intii la bilaabay moodooyinka M11 iyo M11s bisha November. Hadda wuxuu rabaa inuu sii wado gaadhitaanka dadweynaha isagoo wata taleefan weyn oo casri ah iyo baytar awood leh.
Kani waa Gionee Steel 5 cusub
Gionee Steel 5 waa magaca cusub ee taleefanka kuwaas oo imaanshahoodu noqon doono Shiinaha, markaa shirkaddu waxay rabtaa inay daboosho dalalka kale ee Aasiya oo ay fidiso ballaarinta caalamiga ah. The Steel 5 wuxuu ku darayaa shaashadda 6.2 ″ IPS LCD oo leh xallinta 720p iyo 5.000 mAh batari oo awood u leh inuu sii socdo muddo dheer.
Mid ka mid ah qodobbada taban ayaa laga yaabaa inaysan bixinaynin dalab degdeg ah, waa 10 W, waa mobiilka 4G wuxuuna leeyahay laba boos oo kaarka SIM ah. Waxay bixisaa kamarad 13-megapixel selfie ah, xagga dambe waxaa ku yaal kamarad laba jibbaaran 12MP iyo 2MP dareemayaal qoto dheer oo leh laba-LED flash.
El Gionee Steel 5 waxay yeelan doontaa processor octa-core Lama garanayo xilligan, waxaa jiri doona laba habayn oo la kala dooran karo, midkoodna leh 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo kayd ah ama 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB. Ku dar WiFi, Bluetooth, iyo jaakadda dhagaha.
Wuxuu la yimaadaa AmigoOS oo ku saleysan Android 9 Pie, tallaabo muhiim ah ayaa noqon doonta in la helo casriyeynta software -ka ugu dambeeyay, oo muhiim u ah taleefannada cusub. Gionee ma uusan shaacin taariikhda la siidaayay iyo sicirka Birta 5 waxaana la filayaa inaan dhowaan ogaan doonno wax walba oo ku saabsan taleefankan casriga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Gionee Steel 5, oo ah nooca soo socda ee taleefanka dhexe